नवमीको रात मान्छेको मासु काटेर चढाइने पाटनको मन्दिर… – Palika Express
नवमीको रात मान्छेको मासु काटेर चढाइने पाटनको मन्दिर…
PalikaExpress ६ कार्तिक २०७७, बिहीबार 1344 पटक हेरिएको
अस्ति पिसिआर टेस्ट गर्न नाकमा सुइरो घुसाउँदा मेरो सातोपुत्लो उडेको थियो। कहिलेकाहीँ इन्जेक्सन लगाउनुपर्‍यो भने सुई देखेरै सिरिंग भएर आउँछ।यस्तो पितुर्के मान्छेलाई जीउको मासु काट्ने वा छाला ताछ्ने कुरा सुन्दा के भयो होला!मेरो त डरले जीउभरि काँडा उम्रेका थिए, जब मैले पाटन, सुबहाल (सौबहाल) को एउटा मन्दिरमा मान्छेको मासु चढाएर पूजा गरिन्छ भन्ने थाहा पाएँ।धेरैलाई यस्तो परम्पराबारे सुनेरै अचम्म लाग्यो होला! यस्तो पनि पूजा हुन्छ कहीँ!हुँदो रहेछ, भइरहेकै छ।यो सुबहालको जय मनोहर महाविहारस्थित महांकाल मन्दिरको कथा हो, जहाँ हरेक दसैंमा नवमीको रात भक्तजनहरूले आफ्नै शरीरको मासु काटेर वा छाला ताछेर यज्ञवेदीमा अर्पण गर्छन्।आज म तपाईंहरूलाई यही पूजाविधि र यसको कथा सुनाउँदैछु।
धेरैलाई त सुबहाल कहाँ पर्छ भन्ने नै थाहा नहोला। काठमाडौं उपत्यकामा मूलसडकबाट भित्र गल्ली-चोकहरू चहार्दा यस्ता अनेकौं बहाल भेटिन्छन्, जहाँ प्रायः मान्छे बिरलै पुगेका हुन्छन्। सुबहाल त्यसैमध्ये एक हो।म तपाईंहरूलाई त्यही ठाउँ लैजान्छु है त।
बहालमा स–साना चैत्यहरू देखिन्छन्। तिनै चैत्यबाट दाहिनेतिर एउटा पुरानो घर छ, जहाँ काठको ढोकामाथि काठकै कलात्मक तोरण टाँगिएको छ। माथिल्लो तल्लामा साइनबोर्ड झुन्डिएको देखिन्छ, जसमा लेखिएको छ– श्री जय मनोहर महाविहार, सौबहाः (सुबहाः), ललितपुर महानगरपालिका, वडा नम्बर ८, यलः।यहाँ टाउको निहराउनुपर्ला है, ढोका होचो छ।भित्र आँखैअगाडि देखिन्छ महाविहार, जसको छत भुइँचालोमा भत्किएर बनेकै छैन। जस्ताले छोपछाप पारिएको छ। विहारकै छेउमा दक्षिण फर्केको छ, महांकाल मन्दिर।ठाउँ त आइपुगियो, अब हामी काठमाडौं उपत्यकामा सायदै अन्त देखिने अनौठो पूजाको चर्चा गरौं।
हामी पुग्दा मन्दिरको ढोका बन्द रहेछ। मैले आँखीझ्यालबाट चिहाएँ। भित्र फराकिलो पूजाकक्ष थियो। त्यहीँ अर्को बन्द ढोका। ढोकाबाहिर नीलो पर्दा। पर्दामा तीनवटा आँखा र विभिन्न आकृति कुँदिएका। यसलाई महांकालको प्रतिरूप मानिने किरणले बताए।नवमीको रात भक्तजनहरूले शरीरको मासु काटेर चढाउने ठाउँ यही हो। स्थानीयहरू यो संस्कारलाई ‘ला खायेगू’ भन्छन्। नेवार भाषामा ‘ला’ भनेको मासु, ‘खायेगू’ भनेको ताछ्नु।
‘कसैले एक ठाउँको चढाउँछन्, कोही–कोही नडराउनेहरूले एकैचोटि १०–१२ ठाउँकै चढाउँछन्।’बाफरे! कस्तो डर नलाग्ने हो क्या, आफ्नै जीउमा सियो रोप्न, आफ्नै जीउ ब्लेडले काट्न!तपाईंहरूलाई डर लागेन!
‘पहिले–पहिले केटाहरूले मात्र भाग लिने चलन थियो,’ उनले भने, ‘अचेल केटीहरूलाई पनि खुला छ। पोहोर मेरै छोरीले भाग लिइन्।’अनि आफ्नो मासु आफैं काट्नुपर्छ कि अरूले काटे पनि हुन्छ?मेरो यो प्रश्नमा किरणले भने, ‘मैले त आफैं काटेको थिएँ। कसैलाई अर्काले काट्दिन्छन्। काट्ने मान्छेको आँखा तेजिलो र हात नकाम्ने हुनुपर्छ। नभए ठूलो घाउ हुनसक्छ।’
उनका अनुसार, यो पूजाविधिमा सरिक हुनेको संख्या यकिन हुँदैन। कहिले जम्मा तीन–चार जना हुन्छन्, कहिले धेरै भएर पालो पर्खिनुपर्छ। मान्छे आइरहेसम्म पूजा चलिरहन्छ। सामान्यतया राति ९–१० बजेसम्म जारी रहने उनले बताए।पूजाविधिपछि अब हामी कुरा गरौं यो संस्कारसँग जोडिएको कथाको।आखिर कसरी सुरू भयो यस्तो अनौठो संस्कार?
स्थानीय किम्बदन्ती मान्ने हो भने यो करिब नौ सय वर्ष पुरानो चलन हो। यसलाई तत्कालीन समयमा दिइने ‘नरबलि’ को अवशेषका रूपमा लिइन्छ।कसरी?यसका लागि सुबहाल बस्ती र जय मनोहर महाविहार स्थापनाको कथा थाहा पाउनुपर्छ। यो महाविहार विक्रम सम्बत् ११८३ देखि ११९३ बीच तत्कालीन राजा इन्द्रदेवले स्थापना गराएको भनाइ छ।कथा सुरू हुन्छ लिच्छविकालीन काठमाडौंको राजधानी हाँडीगाउँबाट।
पुरातत्वविद् साफल्य अमात्यले आफ्नो किताब ‘काठमाडौं नगरायण’ मा लेखेअनुसार, आगलागीले विशालनगर क्षेत्रको बसाइ छिन्नभिन्न भयो। त्यहाँका बासिन्दा उपत्यकाभरि छरिएर बसोबास गर्न थाले। धेरै मानिस तत्कालीन दक्षिण कोलिग्राम (अहिलेको मध्य–काठमाडौं) सरे भने कोही ललितपुर गएर बसे। तिनैमध्ये सुबहालका बासिन्दा पनि हुन् भन्ने भनाइ छ।
किम्बदन्ती भनेको कथ्य र तथ्यको मिश्रण हो। यहाँ चिलले बाटो देखाएको र महांकालले मान्छे मारेर खाएको भनाइलाई कथ्य मान्न सकिन्छ। तर, यही कथ्यले प्राचीन काठमाडौंको एउटा तथ्य उजागर गर्छ।
इमाडोल, खरिबोटनिर जुन चैत्य हामी देख्छौं, त्यो तत्कालीन हाँडीगाउँवासीले आफूसँगै ल्याएका हुन्, जसलाई उनीहरूले त्यति बेलै इमाडोलमा प्रतिस्थापन गरेका थिए।
सुबहालका बासिन्दाले पुत्रहरूको बलि चढाउँदा–चढाउँदा परिवारको आकार सानो हुँदै गएको हामीले किम्बदन्तीबाट थाहा पायौं। आज पनि जय मनोहर महाविहारसँग जोडिएको समुदायमा परिवार संख्या थोरै छ।
‘अहिले हामी ६३ परिवार छौं, जुन अन्य विहारको दाँजोमा निकै सानो हो,’ किरणले भने, ‘पच्चीस वर्षअघिसम्म त हामी ३० परिवारभन्दा धेरै थिएनौं।’
‘बाफरे! मजस्तो डरछेरुवाले कहाँ पाएर सक्नु! बरू तपाईंकी छोरीले के भनिन्? उनलाई कति दुख्यो रे?’ मैले गत वर्ष पूजामा सरिक किरणकी २० वर्षे छोरीका बारेमा सोधेँ।‘निकै कम?’‘कति कम?’ मैले अझै खिपेँ।‘उसले अस्ति पिसिआर टेस्ट गरेकी थिई। नाकमा सुइरो घुसाउँदा दिनभरि दुखिरह्यो भन्दै थिई, त्यो दुखाईभन्दा कम।’उनले अझै प्रस्ट पार्दै भने, ‘इन्जेक्सन लगाउँदा जति दुख्छ, त्योभन्दा पनि कम।-साभार